နယူးအီမိုဂျီ Keyboard ကို Pro ကို 2017 | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » နယူးအီမိုဂျီ Keyboard ကို Pro ကို 2017
နယူးအီမိုဂျီ Keyboard ကို Pro ကို 2017 APK ကို
သစ်အီမိုဂျီ Keyboard ကို Pro ကို 2017 ဗားရှင်းကြိုးစားပါ။ ကျနော်တို့တောင်မှအန်းဒရွိုက်အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ကီးဘုတ်ခေါ်ခြင်းငှါ,! ဒါဟာမဆိုဖုန်းပေါ်ရှိလူသုံးအများဆုံး App များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် app တစ်ခု keyboard.The ကီးဘုတ် app ထဲတွင်အအေးခံ features တွေအများကြီး pack မှာ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပျော်စရာစာရိုက်ဖြစ်စေခြင်းငှါနယူးအီမိုဂျီ Keyboard ကို Pro ကို 2017 ဗားရှင်းအန်းဒရွိုက်များအတွက်အခမဲ့ကီးဘုတ်ဖန်တီးခဲ့သည်။ သငျသညျ chatting သို့မဟုတ်သစ်ကိုရုပ်ပြောင်ကီးဘုတ် 2017 ဗားရှင်းနဲ့တဲ့ IM-ing, စာသားပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာအသစ်ကအီမိုဂျီရုပ်ပြောင်များနှင့်စတစ်ကာများဆောင်တတ်၏နှငျ့သငျကီးဘုတ် themes များ, စာလုံးတွေနဲ့အသံတွေကိုနှင့်သင်၏ကီးဘုတ် app ကိုစိတ်ကြိုက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
The New အီမိုဂျီ Keyboard ကို Pro ကို 2017 ဗားရှင်းအီမိုတီကွန်များနှင့်အပြုံးမျက်နှာကိုသင်၏အိပ်မက်မက်နိုင်ပါတယ်ရင်ဆိုင်နေရလုံးကိုအသစ်သောရုပ်ပြောင်ရှိပါတယ်! ရွေးချယ်စရာ 1000 + ညာဘက်ရှိသင့်ရဲ့ကီးဘုတ် app ထဲမှာရှိပါတယ်အဖြစ်အပြုံးမျက်နှာ, ရုပ်ပြောင်များနှင့်ရုပ်ပြောင်နဲ့အတူ chat!
သစ်အီမိုဂျီ Keyboard ကို Pro ကို 2017 ဗားရှင်းအန်းဒရွိုက်များအတွက်အခမဲ့ကီးဘုတ်သုံးပြီးသင်ကီးဘုတ် app ထဲမှာလိုအပ်သမျှရှိသည်: အီမိုဂျီရုပ်ပြောင်, အပြုံးမျက်နှာ, အီမိုဂျီစတစ်ကာများနှင့်ရုပ်ပြောင်ဟောကိန်းများ။ ကျနော်တို့ le Lenny မျက်နှာ, လက်ခလယ်အီမိုဂျီတာအီမိုဂျီပူခွေးအီမိုဂျီ 100 နိမိတ်လက္ခဏာကိုရုပ်ပြောင်များနှင့်ပင်ကြံ့မျက်နှာပေးပို့နိုင်ပါတယ်အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကီးဘုတ်အသစ်ရုပ်ပြောင်အများကြီးပေါင်းစည်းကြပါပြီ !!!
နယူးအီမိုဂျီ Keyboard ကို Pro ကို 2017 ဗားရှင်းကအရောင်နဲ့တူသောကြောက်မက်ဘွယ် features တွေနှင့်အတူအခမဲ့ဟာ android ဖုန်းများတစ်ခုရုပ်ပြောင်ကီးဘုတ်ရဲ့ 1000 + အီမိုဂျီရုပ်ပြောင်, စတစ်ကာများနှင့်ရုပ်ပြောင်စတစ်ကာများနှင့်အတူအန္တိမကီးဘုတ် app ကိုဖြစ်ပါသည်:
- keyboard ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ။ ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းကီးဘုတ် themes များ
- custom Keyboard ကို။ ပြခန်းဓါတ်ပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးကီးဘုတ်နောက်ခံပြောင်းလဲနေတဲ့ခြင်းဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ပုဒ်ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးထုံးစံကီးဘုတ်ဖန်တီးပါ။
- keyboard ကိုဖောင့်။ ပြောင်းလဲမှုကိုကီးဘုတ်အက္ခရာများစတိုင်များ
- HD ကိုနောက်ခံများ။ သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ wallpaper ကိုပြောင်းပါ။
- Keypress အသံ။ သင်ရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ကီးဘုတ်အသံသည်လမ်းကိုပြောင်း!
- ရုပ်ပြောင် key ကို Pop-up သုံးပါ!။ "Settings" ကိုကနေအင်္ဂါရပ်ကိုသက်ဝင်! သင်ရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးရုပ်ပြောင် pop-up ပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့ကီးဘုတ်ကနေ!
- သင့်ကိုယ်ပိုင်အီမိုဂျီ Keyboard ကို 2017 စတိုင် Make။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုနောက်ခံ changer feature ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကီးဘုတ်ဖန်တီးပါ။ ပြခန်းအနေဖြင့်ဓါတ်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံကိုရွေးချယ်ပါ!
- Keyboard ကိုအရောင် changer။ themes များအကြားပြောင်းလဲပစ်ရန်အအရောင်သက်တံ့ဘီးနှိပ်ပါ။ ဒါဟာအန်းဒရွိုက်အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ကီးဘုတ်စေသည်
သင်ကများကဲ့သို့အံ့သြဖွယ် features တွေရှိပါတယ်အဖြစ်စာပို့ခြင်းနှင့် chatting အဘို့ဤကီးဘုတ် app ကို Ultimate အီမိုဂျီကီးဘုတ်သရဖူကိုပါလိမ့်မယ်:
-ရုပ်ပြောင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏။ သင်သည်သင်၏ခံစားချက်များကိုဖော်ပြထားတဲ့ရုပ်ပြောင်လိုအပ်ခဲ့လျှင်သင်တို့သည်ငါတို့၏ကီးဘုတ် app ကိုအဆုံးစွန်ရုပ်ပြောင်ကီးဘုတ် 2017 ထဲမှာရှာတွေ့လိမ့်မည်!
-အပြုံးပုံမျက်နှာများ။ ရှုပ်ထွေးရုပ်ပြောင်များအတွက်လိုအပ်ချက်မရှိသေးပါ, သင်စကားပြောဆိုမှုအတွက် join ဖို့ဂန္အပြုံးမျက်နှာကနေရှေးခယျြနိုငျ
-ဂန္ထဝင်ရုပ်ပြောင် ။ သငျသညျအဟောင်းများကိုကျောင်းမှာနေနှင့်ဂန္ရုပ်ပြောင်လက်လွတ်လျှင်, ငါတို့သည်ညာဘက်ရှိသင့်ရဲ့ကီးဘုတ် app ထဲမှာ, သူတို့ကိုရရှိပါသည်!
-တမန်များနှင့်ချတ်များအတွက်စတစ်ကာများ။ ရုပ်ပြောင်, အပြုံးပုံသို့မဟုတ်ရုပ်ပြောင်အပြုံးမျက်နှာသေးငယ်လွန်းလျှင်, သင်လည်းတမန်များနှင့်ချတ်များအတွက်ထုံးစံစတစ်ကာများကိုသုံးနိုင်သည်
ငါတို့ရှိသမျှသည်အီမိုဂျီရုပ်ပြောင်များနှင့်အပြုံးမျက်နှာအဲဒီမှာအထဲကရင်ဆိုင်နေရဖော်ပြရန်ကီးဘုတ် app ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီကို chat app ကိုရုပ်ပြောင်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာအရပ်ရှိပါတယ်သည့်အခါကရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောရုပ်ပြောင်ကီးဘုတ် 2017 ကိုသုံးပါ Android အတွက်အခမဲ့ကီးဘုတ်နဲ့သင်အမြဲနေရာတစ်ခုတည်းကသူတို့ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
နယူးအီမိုဂျီ Keyboard ကို Pro ကို 2017 ဗားရှင်းကဤဘာသာစကားများလာ:
- ဂျာမန် (Deutsch)
- ဟီးဘရူး (עברית)
- အီတလီ (Italiano)
- ရုရှား (Россия)
- စပိန် (Espanol)
- ထိုင်းနိုင်ငံ (ประเทศไทย)
- အာရပ် (العربية)
- ဘင်္ဂါလီ (বাংলা)
- ဂရိ (ελληνικά)
- ဂူဂြာရ (ગુજરાતી)
- ဟိန်ဒီ (हिंदी)
- ကန်နာဒါ (ಕನ್ನಡ)
- မလေးရာလ (മലയാളം)
- ပါရှန် (پارسیان)
- ပနျခြာပီ (پنجابی)
- တမီး (தமிழ்)
- ဂု (తెలుగు)
သစ်အီမိုဂျီ Keyboard ကို Pro ကို 2017 ဗားရှင်းစမ်းကြည့်ပါ! ပိုကောင်းတဲ့ကီးဘုတ် app ကိုအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့နှုန်းသည်နှင့်မှတ်ချက်။ သင်အမြဲ keyboardtrendingapps@gmail.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးနိုငျသညျ!
နယူးအီမိုဂျီ Keyboard ကို Pro ကို 2017
8.14 ကို MB
ရုပ်ပြောင် Keyboard ကို 2017 Themes
Download & လုပ်နည်း ...
Kika အီမိုဂျီ ...
Google က Indicator Keyboard ကို
Deanna Hopper says:
နိုဝင်ဘာလ 18, 2017 မှာ 2: 18 ညနေ
ငါဒီ App ကိုခေါ်တော်မူ Go ကို Keyboard ကို Lite ကိုအခမဲ့ငျတှေ့ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ? အိုင်ဖုန်း7သနည်း သင်ကများရှိပါသလား? တွေ့ပုံပေါ်လို့မရပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Deanna Hopper
Solar Walk Lite - Planetarium 3D: ဂြိုလ်များ ...